Windows ကို 10 အတွက်ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်ကီးဘုတ် input ကိုကိုသက်ဝင် - သိကောင်းစရာများ - Tele RELAY တစ်ခု
မူလစာမျက်နှာ » အကြံပြုချက်များ "Windows ကို 10 အတွက်ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်ကီးဘုတ် input ကို Activate - သိကောင်းစရာများ
စမတ်ဖုန်းများနှင့် tablet တွင်တွေ့ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်စာသားလိုပဲ? ကောင်းသောသတင်း: Windows ကို 10 ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကီးဘုတ်နှင့်အတူ PC ပေါ်မှာစာသားကိုရိုက်ထည့်ဖို့အလားတူ function ကိုရှိပါတယ်။
သင်တစ်ဦးစမတ်ဖုန်းသို့မဟုတ် tablet သုံးလျှင်, Android, iOS ဖြစ်စေ, သင်ပြီးသား, ဤ devices များက virtual keyboard ကိုတစ်ဦးကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်စာသား input ကိုအသုံးပြုသတိပြုမိပါပွီ။ ရှင်းနေသည်မှာပဲအဆိုပြုချက်မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာပြသနေကြပါတယ်စကားလုံးများကိုဖြည့်စွက်ရန်အချိန်အနည်းငယ်အက္ခရာများကိုရိုက်ထည့်။ မကြာခဏအလွန်သက်ဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များ - သူတို့ယေဘုယျအားဖြင့် input ကိုသမိုင်းပေါ်အခြေခံပြီးကြသည် - အသုံးအများဆုံးဝေါဟာရများနှင့်အတူအချိန်ကုန်သက်သာတယ်။ ထိုမကြာခဏစာလုံးပေါင်းမှားယွင်းမှုအလျောက်ကြောင်း Auto-ဆုံးမခြင်းအင်္ဂါရပ်နှင့်ဆက်စပ်နေသည် - ကတစ်ခါတစ်ရံရယ်စရာပိုပြီးသို့မဟုတ်ထိုထက်နည်း, အခြို့အံ့သြဖွယ်များဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်ဖြစ်သောအချင်းချင်းစကားလုံးအစားထိုးလေ့လျှင်ပင် ....
Windows ကို 10 များအတွက်ဘက်ပေါင်းစုံကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်စာသား input ကို
လူအနည်းငယ်ကဤသိကြပေမယ့် Windows ကို 10 အလားတူကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်စာသား input ကိုအတူစံလာသည်။ သူတို့ကိုရှိသည်သောစမတ်ဖုန်း, Tablet နှင့် Laptop တွေ - - ပိုကောင်းသေးပါကမူလထိတွေ့ screen များအတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့သည်ဆိုပါကမိုက်ကရိုဆော့ဖလွန်ကဲကဲ operating system ကိုမိုဘိုင်းကိရိယာများပေါ်တွင်အသံလုပ်ငန်းတွေစတင်ဖို့အိပ်မက်မက်သောအခါလည်းဖြစ်ပါတယ် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကီးဘုတ်ကွန်ပျူတာပေါ်မှာအသုံးဝင်သော။ အကျိုးစီးပွားဆက်ဆက်ပိုပြီးကန့်သတ်, ဒါပေမဲ့သို့ရာတွင်ဒီ function ကိုနေဆဲအချို့ဝန်ဆောင်မှု၏နိုင်ပါတယ်။ ရိုးရှင်းစွာအdésacttivéeက default ဖြစ်ခြင်း function ကိုသက်ဝင်စေ။
Windows ကို 10 များအတွက်ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်စာသား input ကိုကိုသက်ဝင်
သင့်ရဲ့ PC မှာတွင်, လက်ပေါ်ကလစ်နှိပ်ပါ menu က Start နှင့်ကို select setting များကို.
ပြတင်းပေါက်၌ Windows ကို Setting ကိုအပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ အရံပစ္စည်း.
ပေါ်လာတဲ့အသစ်က window ထဲတွင်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ ရောဂါတိုးခြင်းလက်ဝဲကော်လံ၌တည်၏။
ထိုအခါအပိုင်းကိုသွားခွင့် scroll ဟာ့ဒ်ဝဲကီးဘုတ်.
ထို့နောက်လျှော ညွှန်းမြား ခေါင်းစဉ် function ကိုသက်ဝင်စေဖို့ စာရိုက်နေစဉ်စာသားကိုအကြံပြုချက်များ Enable.
သငျသညျလိုပါကလည်းထိုနည်းတူ function ကိုသက်ဝင်စေ စာရိုက်နေစဉ်စာလုံးပေါင်းမှားစကားများအလိုအလျောက်ဆုံးမခြင်း။ ဒါကြောင့်ပဲ!
စာရိုက်နေစဉ်ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက် input ကိုသုံးပါ
အဆိုပါကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်စာသား 10 Windows ကိုချက်ချင်းတက်ကြွဖြစ်ပါတယ်။ သို့ဖြစ်လျှင်သင်သည်ထိုကဲ့သို့သော Notepad, သိမ်းထားခဲ့တဲ့, Microsoft Word သို့မဟုတ် LibreOffice စာရေးဆရာအဖြစ် software ကိုအပြောင်းအလဲနဲ့စာသားအမျိုးမျိုးအတွက်အသုံးပြုနိုင်သည်ဒါပေမယ့်လည်း Webpour browser များအတွက်ဥပမာတစ်ခုဖိုရမ်ပေါ်မှာစာသားကိုရိုက်ထည့်နိုင်ပါတယ်။
သင့်ရဲ့ဆော့ဖ်ဝဲ entry ကိုဧရိယာထဲမှာတစ်ဦးစကားလုံး၏ပထမစာလုံးအချို့ကိုရိုက်ထည့်ပါ။
တစ်ဦးကသေးငယ်တဲ့ဘားတန်းပြီးပြည့်စုံသောတရားစကားသို့မဟုတ်ပင်စကားရပ်အချို့ကိုအကြံပြုချက်များနှင့်အတူ superimposed ပေါ်လာသည်။ သင့်လျော်သောအဆိုပြုချက်အပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။ သင်တို့သည်လည်းသင့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုကိုလုပ်မြှားသော့ကိုသုံးနိုင်သည်။
ရွေးချယ်ထားသောစကားလုံးထို့နောက်အစားပထမဦးဆုံးသည့်ဒင်္အက္ခရာများ, Window display တွေနှင့်အနာဂတျအတှကျသည်အခြားအဆိုပြုချက်များ, သင်၏စာသားသို့ပေါင်းစည်းဖြစ်ပါတယ်။
အသုံးပြုမှုများတွင်ဤစနစ်ကချမှတ်ထားတဲ့ကိုင်တွယ်မှုကြောင့်စမတ်ဖုန်းနှင့် tablet မှာအသုံးပွုတဲ့တစျခုထက်လျော့နည်း Ergonomics ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်အနည်းဆုံးတည်ရှိဖို့ကောင်းမှုကုသိုလ်ရှိပါတယ် ...